काठमाण्डौ । बजारमा तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै तीन करोड ७५ लाख ११ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न १८ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवदेशन दिएका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये सातवटाले सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृत पाइसकेका छन् । ११ वटा कम्पनी साधारण सेयर निष्कासन...
चैतभित्र सपोर्टले १.८० करोडको आइपीओ ल्याउने
काठमाण्डौ । सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सले आगामी चैतभित्र १ करोड ८० लाख मूल्यको १ लाख ८० हजार कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । यो माइक्रो फाइनान्सले सोही योजनाका साथ आइपीओ निश्कासन तथा व्यवस्थापनका लागि बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमीटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सका सीइओ...
पुसभित्र समताको आइपीओ आउने, बोर्डबाट स्वीकृति
काठमाण्डौ । समता माइक्रो फाइनान्स बित्तीय संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्न स्वीकृति पाएको छ । यो संस्थालाई बोर्डले ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको ९४ हजार ८ सय कित्ता सेयर आइपीओका लागि मंसिर २९ गते अनुमति दिएको हो । आइपीओ निश्कासनको अनुमति पाएपछि माइक्रो फाइनान्सले आगामी पुस अन्तिमसम्ममा जारी...
पैसा ठीक पार्नुहोस्, पुस ८ गतेदेखि २१ लाख कित्ता सेयरमा लगानीको अवसर
काठमाण्डौ । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमीटेडले आगामी पुस ८ गतेदेखि २१ करोड मूल्यको २१ लाख कित्ता सेयर आइपीओ गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १ सय अंकित दरको सेयरको प्राथमिक निश्कासन गर्न लागेको हो । पुस ८ बाट खुल्ने आइपीओको आवेदन १२ गतेसम्म बन्द हुनेछ । यो अवधिसम्म पनि माग अनुसारको आइपीओको आवेदन नपरेको खण्डमा दोश्रो...
हाइड्रोमा लगानीको अवसर, पुस पहिलो साता २१ करोडको आइपीओ आउने
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमीटेडलाई २१ करोड मूल्यको २१ लाख कित्ता सेयरको आइपीओ गर्ने अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बोर्डले सिनर्जीलाई मंसि २३ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । अन्तिम स्वीकृति आएसँगै पुस पहिलो साता २१ करोड मूल्यको आइपीओमा सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुलाउने तयारी थालेको छ ।&nb...
आउँदैछ लगानीको ठूलो अवसर, ८ कम्पनी ८१.०३ लाख कित्ता सेयर आइपीओ/एफपीओ गर्दै
काठमाण्डौ । सेयरमा लगानी गर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने पैसा जोहो गर्दै गर्नुुहोस्, निकट भविष्यमै ८ कम्पनीहरुले सर्वसाधारणहरुले समेत लगानी गर्न मिल्ने गरी सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) र अतिरिक्त निश्कासन(एफपीओ) गर्दैछन् । चार लघुवित्त संस्था, २ जलविद्युत आयोजना, एक बिमा कम्पनी र एक वाणिज्य बैंकले निकट भविष्यमै आइपीओ र एफपीओ...
काठमाण्डौ । यूूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमीटेडले निकट भविष्यमै १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर आइपीओ गर्ने भएको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १७ लाख २५ हजार कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ)का लागि यूनाइटेड मोदीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि आइपीओ जारी गर्न...
स्वदेशी लघुवित्तको ३ करोडको आइपीओ आउँदै
काठमाण्डौ । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले निकट भविष्यमै ३ करोड मूल्य बराबरको ३ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । आइपीओ निश्कासनको माग गर्दै स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । एनएमबी क्यापिट लिमीटेड आइपीओको निश्कासन र व्यवस्थापनमा बिक्री प्रबन्धक...
अरुण काबेलीको आइपीओमा ४१.६६ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । अरुण काबेली पावर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि खुलाएको ३० करोड मूल्य बराबरको आइपीओमा ४१.६६ गुणा बढी आवेदन परेको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल ३० लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन गरिएकोमा माग भन्दा ४१.६६ गुणा बढीले आवेदन दिएका हुन् । अरुण काबेली पावर लिमीटेडका फाइनान्स चिफ हरिप्रसाद सुवेदीका अनुसार ३० करोड...
२१ करोडको आइपीओ ल्याउँदै सिनर्जी पावर
काठमाण्डौ । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि २१ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । कम्पनीले कात्तिक ७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ निश्कासनका लागि आवेदन दिएको हो । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको २१ लाख कित्ता आइपीओ निश्कासनको आवेदन परेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । कुल २१ करोड...
अरुण काबेलीको आइपीओमा अचाक्ली भीड, दोश्रो दिनमै १० गुणा आवेदन
काठमाण्डौ । ठूला जलविद्युत योजनाहरुको संचालन व्यवस्थित ढंगले गर्ने हो भने लगानीको समस्या नरहेको पछिल्लो समय खुलेका आइपीओमा देखिएको सर्वसाधारणहरुको अचाक्ली भीडले देखाएको छ । अरुण काबेली पावर लिमीटेडले २५ मेगावाटको आयोजनाका लागि खुलाएको ३० लाख कित्ता आइपीओप्रति देखिएको आकर्षणले समेत यही कुरा देखाउँछ । यो कम्पनीको ३० करोड रुपैयाँ...
अरुण काबेलीको आइपीओमा पहिलो दिन नै ओभरसस्क्राइब्ड !
काठमाण्डौ । अरुण काबेली पावर लिमीटेडले खुलाएको आइपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा चार गुणा बढी आवेदन परेको छ । अरुण काबेलीले मंगलबारदेखि ३० लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासनमा सर्वसाधारणबाट आवेदन संकलन गर्न थालेको थियो । कुल ३० करोड रुपैयाँको आइपीओको माग हुँदा पहिलो दिन नै करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको निवेदन प्राप्त भएको बिक्री...
आजदेखि अरुण काबेलीको आइपीओ, कहाँ–कहाँबाट भर्ने आवेदन ?(आवेदन केन्द्रको सूचिसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि अरुण काबेली पावर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि आज(मंगलबार)देखि ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्दैछ । इच्छुक लगानीकर्ताले एसी पे चेकमार्फत अरुण काबेलीको आइपीओका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । अरुण काबेलीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको आइपीओ...
जनताले पनि लगानी गर्न पाउने गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाइँदै
काठमाण्डौ । सरकारले जलविद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ, त्यहाँ समेत यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । अर्थ...
कात्तिक ९ देखि अरुण काबेलीको आइपीओ, कहाँ–कहाँबाट भर्ने आवेदन ?(सूचिसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि अरुण काबेली पावर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । कात्तिक ९ गतेदेखि इच्छुक लगानीकर्ताले एसी पे चेकमार्फत अरुण काबेलीको आइपीओका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । अरुण काबेलीले १...